HOME » SPORTS »Mexico
Muchengeti wemuiti weTexicoan team team Guillermo Ochoa ari kutarisa kubva muBelgian club Standard Liege iri zhizha. Mutambo weSvondo neGenke uchave wekupedzisira muBelgium wokutanga.
"Kune chichiri chikafu. Ndinofunga kuti ichava mutsara wangu wokupedzisira, "Ochoa akati mushure mokunge 2-0 yakundwa neClub Brugge musi weChina, mune zvinyorwa zvakabudiswa pawebsite yebato .
"Tatove tataura nekambani uye pane zvimwe zvinhu zvingagadziriswa kunze, asi ndinofunga kuti nguva yasvika yokuti ibve. "
Ochoa akabatana neS Standard de Liège munaJuly 2017 kubva kuMalaga uye aive achigara pachikwata, achikunda Belgian Cup mu2018. Ochoa yakatumidzwa mutambi wechikamu chechikwata vhiki ino.
"Ndine shungu nokuti ndinofarira kechikwata uye ndapa zvose zvayo, asi mubasa raunyanzvi, iwe nguva dzose unofanira kutamba mumakwikwi akanaka kana kuwana zvinhu zvitsva," akadaro.
Uyu aimbova muchengeti weColombia America, uyo akatamba kuMexico ku201 8 World Cup, akaisawo Instagram chinyorwa ichionga vatenzi ve Standard.
Ona iyi chinyorwa pa Instagram
Dzvanya pano kuti uone kupfupisa kwakakwana kwekutsvakurudza kwako, mazano, maongorori, mhinduro, kuongorora uye mhinduro kune zvido zvako. , zvinwiwa, zvishandiso nemidziyo nemishonga yepamusoro yehushuwarisi yemunhu, 100% pachigaro chebasa, nebasa rekugadzirira ... Gira revatungamiri, vashandi, vashandi, vashandirwi, vashandi vebato ... Read more on iFANS iwe unoda kuona ikozvino nemhuri yako kana shamwari yako itsva muLiège ... GRACIAS !!! #goblue @standardliegeEs
Nzvimbo yakagoverwa Guillermo Ochoa (@ yosoy8a) the iyo 16 May 2019 kusvika 14h35 HAP
Sources akaudzwa ESPN FC kuti Ochoa anoda kugara muEurope, pasinei nekufarira kwakaratidzwa neMLS. Uye kana kutamira kuUnited States kana kuLiga MX nguva dzose kuchava sarudzo, Ochoa, uyo anotarisira kuwana pipisipoti yeSpain mumavhiki anouya, akaisa zvirongwa zvezhizha dzekutsvaga kuwana boka idzva muEurope.
Ochoa yave iri
MLS kambani muNashville neChicago Moto dzakashamisika kuti dzaifarira mumavhiki apfuura, neNashville pakutanga kuratidza kufarira kuOchoa asati asarudza kuenderera mberi, maererano naJeff Carlisle weESPN
Mutsamba weESPN FC Spain, Moises Llorens, vakabatsira mukunyora kwehupfumi uyu.
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/mexico/story/3855961/mexicos-ochoa-time-to-leave-standard-liege
Mutambi we Qatari kushanda kuCONCACAF Gold Cup
Google inoti inoda kubatsira kubvisa Punch Line, kwete kuifambisa - vanhu
Chiedza che LED chichienda pamotokari yako chiri kutengeswa kwe12 $ - BGR
"Mario Kart Tour" ishanduro yakatendeka inoshamisa yeNintendo yakakurumbira mutsara weRace - BGR